May 2020 - Myanmar Sports Villages
အာဆင်နယ်အသင်းခေါင်းဆောင်ကို ခေါ်ယူဖို့ မျက်စိကျနေသည့် စီးရီးအေအင်အားကြီးကလပ်များ (ESPN)
ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ နာမည်ကျော် လာမာစီယာအကယ်ဒမီကနေ အာဆင်နယ်အသင်းကို ၁၆ နှစ်သားအရွယ်မှာ ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ စပိန်ကစားသမား ဘယ်လာရင်ဟာ နည်းပြကြီး အာဆင်ဝင်းဂါးရဲ့ အရောင်တင်ပေးခဲ့တဲ့ ကြယ်ပွင့်ကစားသမားဖြစ်သလို၊ အသင်းမှာလည်း ၂၀၁၄-၁၅ ရာသီကစလို့ ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘယ်လာရင်ဟာ ယခင်အာဆင်နယ်နည်းပြဟောင်း အူနိုင်းအမ်မရီရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်အစုအဖွဲ့ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အာတီတာလက်ထက်အရောက်မှာတော့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ့ ပွဲမှာ အသင်းခေါင်းဆောင်လက်ပတ်ဝတ်ပြီး ပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဘယ်လာရင်ကို အီတလီစီးရီးအေကလပ်များဖြစ်သည့် ဂျူဗင်တပ်စ ်နှင့် အင်တာမီလန်အသင်းတို့က စိတ်ဝင်စားနေပြီး လာမည့်အပြောင်းအရွှေ့မှာ ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးပမ်းလာနိုင်တယ်လို့ ESPN သတင်းဌာနက ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဘယ်လာရင်ဟာ အာဆင်နယ်အသင်းအပေါ်မှာ ချစ်မြတ်နိုးစိတ်ရှိသည့်အပြင် အသင်းမှာဆိုရင်လည်း ခေါင်းဆောင်စိတ်ပြည့်ဝသည့် လူငယ်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ ဘယ်လာရင်ဟာ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ စာချုပ်သက်တမ်းရှိနေတာဖြစ်ပြီး အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ လက်ရှိအနေအထားကို စိတ်ပျက်ကာ အသင်းမှ ထွက်ဖို့အလားအလာရှိတယ်လို့...
Official : PSG က အင်တာမီလန်အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်း အိုက်ကာဒီကို အပြီးသတ်ခေါ်ယူလိုက်ပြီ
ပြင်သစ် ပဲရစ်ကလပ် PSG အသင်းဟာ အင်တာမီလန်အသင်း၏ အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်း အိုက်ကာဒီကို ယူရိုသန်း ၅၀+ အပိုဆုကြေးငွေ ယူရို ၈ သန်းနှင့်အတူ အပြီးသတ်ခေါ်ယူလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ PSG အသင်းဟာ ဥရောပရဲ့ တိုက်စစ်ကစားသမားအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ကလပ်ဖြစ်သော်လည်း အိုက်ကာဒီကို အပြီးသတ်ခေါ်ယူဖို့အတွက် လွန်ခဲ့သည့်အပတ်ကတည်းက ပြင်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သည့် အပတ်ကတည်းက PSG အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူတွေဟာ အင်တာမီလန်အသင်းတာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စအတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ PSG ဟာ အိုက်ကာဒီကို ၄ နှစ်စာချုပ်ဖြင့် ခေါ်ယူခဲ့တာပါ။ လာမည့်အချိန်အတွင်း အိုက်ကာဒီ၏ အပြောင်းအရွှေ့စာချုပ်အသေးစိတ်ကို နှစ်သင်းစလုံးမှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာသွားမယ်လို့ သိရပြီး အဆိုပါ စာချုပ်အချက်အလက်တွေထဲမှာတော့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းထံသို့ ပြန်ရောင်းခွင့်မရှိဆိုသည့်အချက်ကို ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုထားတယ်လို့ Goal.com ကဖော်ပြထားပါတယ်။ PSG အသင်းဟာ အိုက်ကာဒီကို ခေါ်ယူနိုင်ခြင်းကြောင့် ဝမ်းသာမိကြောင်း နှင့် အင်တာမီလန်အသင်းကလည်း အိုက်ကာဒီကို...
Categories Ligue 1/Transfer
၂၀၁၉-၂၀ ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီကို မဖြစ်မနေ အဆုံးသတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းခေါင်းဆောင် ဟန်ဒါဆင်
အင်္ဂလန်ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ လီဗာပူးလ်ဟာ အင်္ဂလန်အမှတ်ပေးဖလားကို ၁၈ ကြိမ်တိတိ သိမ်းပိုက်ခဲ့ဖူးသော်လည်း ပရီးမီးယားလိဂ်လို့ ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစလို့ လက်ရှိအချိန်ထိ အမှတ်ပေးဖလားကို တကြိမ်တခါမှမရဖူးသေးပါဘူး။ အချိန်ကာလကို တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် နှစ်ပေါင်း (၃၀) တိတိပြည့်သွားခဲ့ပါပြီ။ အောင်မြင်သမိုင်းကြောင်းအရ ပုံရိပ်မြင့်မားတဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ ကလော့ပ်ကိုင်တွယ်ပြီးနောက်ပိုင်း သူတို့အလိုချင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို သိမ်းပိုက်ဖို့အတွက် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကြိုးစားအားထုတ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ သူတို့ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုဟာ ရုပ်လုံးပေါ်လာခဲ့ပြီး ဖလားရဖို့ လက်တကမ်းအလိုကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သာ ဝင်ပြီးမနှောက်ယှက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီလိုအချိန်မှာ လီဗာပူးလ်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကြီးကို ကိုင်မြှောက်ပြီး မာဆေးဆိုက်ဒ်မှာကောင်းကောင်းကြီး အောင်ပွဲခံနေလောက်ပါပြီ။ UKမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၂၇၀၀၀၀ လောက်ထိရှိခဲ့ပြီး သေဆုံးသူပေါင်း ၄သောင်းဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အတိုင်းတာတခုထိ ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုတည်ငြိမ်သွားပြီဖြစ်သည့်အတွက် လာမည့်ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့မှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲကြီးကို တဖန်ပြန်လည်စတင်မယ်လို့ အတည်ပြုကြေငြာခဲ့ပါပြီ။ လက်ရှိအမှတ်ပေးဇယားရပ်တည်မှုအရ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ ဒုတိယနေရာက မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကို ၂၅ မှတ်ဖြတ်ကာ ဦးဆောင်ထားပြီး...
အီဂါလိုကို ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီလအထိ အဌားစာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ နီးစပ်နေပြီဖြစ်သည့် ယူနိုက်တက် (Sky Sports)
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ရှန်ဟိုင်းရှန်ဟွာ တိုက်စစ်မှူး အီဂါလိုကို အဌားစာချုပ်သက်တမ်းထပ်တိုးဖို့အတွက် ဆွေးနွေးနေခဲ့ရာ အောင်မြင်မှုရလုနီးနီးဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း Sky Sports သတင်းဌာနက ဖော်ပြထားပါတယ်။ အီဂါလိုဟာ ပြီးခဲ့သည့်ဆောင်းရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ ၆ လအဌားစာချုပ်တစ်ရပ်ဖြင့် ယူနိုက်တက်သို့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခုလအကုန်မှာတော့ မိခင်ကလပ် ရှန်ဟိုင်းရှန်ဟွာသို့ ပြန်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အီဂါလိုကို ဆိုးလ်ရှားကိုယ်တိုင်လိုလိုလားလား နဲ့ ဆက်လက်ခေါ်ယူလိုတာဖြစ်သုလို၊ သရဲနီပရိသတ်တွေကလည်း ရာသီအကုန်ထိ ယူနိုက်တက်မှာ ကစားသွားဖို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ အီဂါလိုဟာ ထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှူးတစ်ယောက်မဟုတ်သော်လည်း ယူနိုက်တက်အတွက် အထောက်အပံ့များစွာ ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာပြသာနာတွေနဲ့ ဗျာများနေတဲ့ ဆိုးလ်ရှားကို အသက်ရှူချောင်စေခဲ့တာအမှန်ပါပဲ။ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးကိစ္စအောင်မြင်ခဲ့ပါက အီဂါလိုဟာ ၂၀၂၀ တရုတ်စူပါလိဂ်တစ်ရာသီလုံးကို လွဲချော်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ ၂၀၂၀ တရုတ်စူပါလိဂ်ဟာ မကြာခင် ဇူလိုင်လအတွင်း စတင်ကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထပ်တိုးချုပ်ဆိုမည့် စာချုပ်သစ်အရ အီဂါလိုဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအထိ အိုးထရက်ဖို့ဒ်မှာ ဆက်ရှိသွားမှာပါ။ ရှန်ဟိုင်းရှန်ဟွာအသင်းနှင့် အီဂါလိုဟာ ၂၀၂၂...
အသင်းနှင့်အတူ ပြန်လည်ပွဲထွက်ဖို့ အသင့်အနေအထားပိုင်ဆိုင်ထားပြီဖြစ်သည့် ရီးရဲလ်ဂိုးသမား #ကော်တွိုက်စ်
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် ပင်တိုင်ဂိုးသမား ကော်တွိုက်စ်က လာမည့်ဇွန်လအတွင်း ပြန်လည်ကျင်းပမည့် လာလီဂါပွဲစဉ်တွေအတွက် အသင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ဟလာခဲ့ပါတယ်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ဘောလုံးပွဲတွေ အားလုံးရပ်နားလိုက်စဉ်မှာတော့ ကစားသမားတွေအားလုံးလည်း ကိုယ့်အိမ်မှာ ကိုယ်နေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်ရေးထရိန်နင်းတွေသာ ပြုလုပ်နေကြရပါတယ်။ ဂိုးသမားတွေကတော့ ဘောလုံးပြန်ကစားဖို့အတွက် ကြောက်ရွံ့မှုများရှိနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အချိန်တိုတွင်းမှာ ထရိန်နင်းတွေကို အရှိန်မြင့်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်သလို၊ ထရိန်နင်းနှင့် ကင်းတာကြာပြီဖြစ်သည့်အတွက် ပုံမှန်လက်စွမ်းအောက် ရောက်မှာကို အကြီးအကျယ်စိုးရိမ်နေပါတယ်။ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းသားတွေဟာ လွန်ခဲ့သည့် ၂ ပတ်ကတည်းက ထရိန်နင်းကွင်းထဲကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ထရိန်နင်းဆင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကော်တွိုက်စ်ကတော့ ဘောလုံးနှင့် ပြန်လည်ထိတွေ့ခွင့်ရသည့်အတွက်ကြောင့် ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေပါတယ်။ “ထရိန်နင်းကွင်းထဲကို ပြန်လာဖို့ တော်တော်လေးဆန္ဒရှိသလို၊ ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်း ကောင်းကောင်းလုပ်နေကြပါတယ်။ ပထမတပတ်ကတော့ ကျွန်တော့်တို့အတွက် ထူးဆန်းနေကြတယ်၊ ဘာလို့ဆိုတော့ တစ်ဦးချင်းထရိန်နင်းလုပ်ရတာမို့လို့။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း အချိန်တွေမှာတော့ အုပ်စုလိုက်ပြန်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပထမတစ်ပတ်ထက်တော့ ပိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီထက်ဆိုးတာက ကျွန်တော်ဟာ ကိုဗစ်ကာလအတွင်း...
တောင်ပံတိုက်စစ်အတွက် ဂျေဆူးကိုရိုနာကို ချိတ်ဆက်နေသည့် #ချယ်လ်ဆီး
ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ တောင်ပံတိုက်စစ်အင်အားကို ဖြည့်တင်းဖို့အတွက် ပေါ်တိုအသင်း၏ မက္ကဆီကို ကစားသမား ဂျေဆူးကိုရိုနာကို ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်ဟု ကိုရိုနာ၏ အေးဂျင့်ဖြစ်သူက အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ အဓိက ပစ်မှတ်မှာ ဒေါ့မွန်အသင်း၏ တောင်ပံကစားသမား ဂျေဒန်ဆန်ချိုဖြစ်သော်လည်း ပြောင်းရွှေ့ကြေးများလွန်းသည့်အပြင် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် နှင့် အပြိုင်ခေါ်ယူရဖို့ရှိသည့်အတွက် ကိုရိုနာကို နောက်ထပ် ပစ်မှတ်တစ်ခုအဖြစ် အရံထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုရာသီအကုန်မှာတော့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ ဝါရင့်ကစားသမားများဖြစ်သည့် စပိန်ကစားသမား ပတ်ဒရို နှင့် ဘရာဇီးလ်ကစားသမား ဝီလီယမ်တို့ဟာ စာချုပ်သက်တမ်းပြည့်၍ စတမ်းဖို့ဘရစ်ချ်ကို စွန့်ခွာဖို့နီးစပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကစားသမားများ၏ နေရာကို အစားထိုးဖို့အတွက် ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ဈေးကွက်အတွင်း တောင်ပံကစားသမားများကို အပူတပြင်းရှာဖွေလျက်ရှိပါတယ်။ ကိုရိုနာ၏ အေးဂျင့်ဖြစ်သူ မာတီယက်စ်ဘန်ဂီမှ လက်ရှိသတင်းထွက်နေတဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ကို အတည်ပြုခဲ့သည့်အပြင် ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ပြောခဲ့ပါတယ်။ “သူတို့ (ချယ်လ်ဆီး) နဲ့ စကားပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကိုရိုနာရဲ့ ရွှေးချယ်မှုက A,B,C ဆိုလားကိုတော့ ကျွန်တော်...
နှစ်ပေါင်း (၃၀) ကြာဝေးကွာနေတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို သိမ်းပိုက်ပြီး ချန်ပီယံပါတီကျင်းပဖို့ အာသီသပြင်းပြနေသည့် #ရော်ဘတ်ဆန်
လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ နောက်ထပ် ပရီးမီးယားလိဂ် (၂) ပွဲကို အနိုင်ကစားရုံဖြင့် နှစ်ပေါင်း (၃၀) ကျော်ဝေးကွာနေတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရရင် ဂျိုးကြာနီတွေဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲကြီး စတင်ယှဉ်ပြိုင်ကတည်းက ယခုချိန်အထိ ဆယ်စု (၃) ခုစာအတွင်း ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို ရယူခဲ့ဖူးခြင်းမရှိပါဘူး။ သူတို့အနေနဲ့ အမှတ်ပေးဖလားကို နောက်ဆုံးရရှိခဲ့တာက ၁၉၈၉-၉၀ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပြီး ထိုစဉ်က ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ ဖလားငတ်မွတ်နေတဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းအတွက် ယခုရာသီဟာ သေချာပေါက်ဖလားရဖို့ရှိနေပါတယ်။ လက်ရှိအမှတ်ပေးဇယား ရပ်တည်မှုအရ လီဗာပူးလ်ဟာ ဒုတိယနေရာမှ မန်ချက်စီးတီးအသင်းကို တပွဲသာ (၂၅) မှတ်ဖြတ်ထားပြီး အမှတ်ပေးဇယားကို သာသာယာယာဦးဆောင်ထားပါတယ်။ နောက်ထပ် (၂) ကိုသာ အမှားအယွင်းမရှိ အနိုင်ကစားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲရသွားပါပြီ။ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲကြီးဟာ လာမည့် ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့မှာ ပြန်လည်စတင်မှာဖြစ်သောကြောင့် လီဗာပူးလ်အသင်းအနေဖြင့် ဇူလိုင်လအတွင်းမှာပင် ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားသိမ်းပွဲကို ကျင်းပခွင့်ရဖို့...
လောလောဆယ် အသင်းပြောင်းဖို့ထက် အိမ်ပြန်ဖို့သာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားသည့် ဟာကီမီ
ဒေါ့မွန်အသင်းတွင် အဌား ၂ ရာသီစာချုပ်ဖြင့် လာရောက်ကစားလျက်ရှိသည့် မော်ရိုကို နောက်ခံလူ ဟာကီမီဟာ ယခုရာသီအကုန်မှာတော့ ဒေါ့မွန်နှင့် စာချုပ်သက်တမ်းပြည့်ပြီဖြစ်တာကြောင့် မိခင်ကလပ် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်သို့ ပြန်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဟာကီမီအေးဂျင့်က အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဘွန်ဒက်လီဂါရဲ့ အမြန်ဆုံးကစားသမားအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရတဲ့ ဟာကီမီဟာ ဂျာမန်မြေမှာ အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းပြနေပြီး အာဆင်နယ်၊ ချယ်လ်ဆီးအစရှိသည့် အသင်းကြီးများက စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိပြီး ခေါ်ယူဖို့ ချိတ်ဆက်နေတယ်လို့ သတင်းများထွက်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။ ဟာကီမီဟာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်မှာ ကစားစဉ်က နာချို၊ ကာဗာဂျယ်၊ အော်ရီဒိုဇိုလာအစရှိသည့် ကစားသမားများရှိနေသည့်အတွက် ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်မသေချာတာကြောင့် ဒေါ့မွန်အသင်းကို အဌားဖြင့် ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရီးရဲလ်လူငယ်အကယ်ဒမီမှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ ဟာကီမီဟာ တခြားအသင်းတွေကို ပြောင်းဖို့ထက် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်မှာ ပြန်ကစားဖို့ စဉ်းစားထားပြီး အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေကို နှုတ်ဆိတ်စေခဲ့ပါတယ်။ အပြောင်းအရွှေ့နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဟာကီမီ အေးဂျင့် ကာမာနိုက “ဒီရာသီပြီးသွားခဲ့ရင်တော့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကို ပြန်ဖို့ ချိတ်ဆက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။...
Categories Bundesliga/La Liga
အမေရိကန်မှာ ဆေးကုသစရိတ်မတက်နိုင်လို့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ရီးရဲလ်ဘက်တစ် ပရိသတ်တစ်ဦးအတွက် ငွေကြေးအမြောက်အမြား လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စီဘယ်လော့စ်
အာဆင်နယ်အသင်းမှာ အဌားဖြင့် လာရောက်ကစားလျက်ရှိသော ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် ကွင်းလယ်လူ စီဘယ်လော့စ်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဆေးကုသစရိတ်မတက်နိုင်၍ ဒုက္ခရောက်နေသော ရီးရဲလ်ဘက်တစ် ပရိသတ်တစ်ဦးအတွက် ဒေါ်လာ ၃၅၀၀ (မြန်မာငွေ သိန်း ၅၀နီးပါး) ကို အွန်လိုင်းဖောင်ဒေးရှင်းမှတဆင့် လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ရီးရဲလ်ဘက်တစ် ပရိသတ် လီနာရက်စ်ဟာ ပြီးခဲ့သည့် တနင်္လာနေ့က နှလုံးရုတ်တရက်ဖောက်ပြန်မှုကြောင့် ဆေးရုံတင်လိုက်ရသလို၊ ကိုမာ ရောဂါပါတပါတည်းစတင်ခံစားနေရပြီဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်ရပါတယ်။ လီနာရက်စ်၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မိသားစုမှ လီနာရက်စ်ကို အကောင်းဆုံးကုသပေးနိုင်ဖို့အတွက် အွန်လိုင်းပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် GoFundMe မှတဆင့် အလှူခံခဲ့ကြပါတယ်။ လီနာရက်စ်ဟာ ရီးရဲလ်ဘက်တစ်အသင်းရဲ့ အမာခံပရိသတ်တစ်ဦးဖြစ်သလို၊ ကိုဗစ်-၁၉ lock down ကာလအတွင်း သူ၏ ကလေးငယ် အိမ်တွင်စာသင်နေသည့် ဗီဒီယိုများကို တင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီ ဗီဒီယိုများကိုတော့ ရီးရဲလ်ဘက်တစ်အသင်းမှ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် လူအများတွေ့စေရန်အတွက် ဘက်တစ်အော်ဖစ်ရှယ် ဆိုရှယ်မီဒီယာမှတဆင့် ပြန်ရှဲပေးထားပါတယ်။ ဘက်တစ်ရဲ့ လူငယ်ရော၊...